कुखुरा,बङ्गुर,खसीबोका,राँगाको मासुको मुल्य निर्धारण, कति छ्न त किलोको मुल्य? - Malayakhabar
होम पेज अर्थ / कर्पोरेट कुखुरा,बङ्गुर,खसीबोका,राँगाको मासुको मुल्य निर्धारण, कति छ्न त किलोको मुल्य?
कुखुरा,बङ्गुर,खसीबोका,राँगाको मासुको मुल्य निर्धारण, कति छ्न त किलोको मुल्य?
काठमाडौं:= मासु व्यवसायीहरुले दशैँका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपीे आफूखुशी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
आन्द्राभुडी राखिएको मासु प्रतिकिलो रु. १ हजार, बोसो राखिएकाको रु. १ हजार २०० र ह्याकुलासहित रोजाइ ९ग्राहकले रोजे अनुसारको मूल्य रु. १ हजार ३०० निर्धारण गरिएको हो ।यस्तै कुखुराको मासु प्रतिकिलो रु. ३०० तथा रागाँ र बङ्गुरको मासु रु. पाँच÷पाँच सय तोकिएको छ ।
अध्यक्ष खड्गीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्ने बताउनुभयो । चीनबाट च्याङ्ग्रा आएको छैन । देशमा उत्पादन भएका च्याङ्ग्रा कम हुँदा व्यवसायीले आफूखुशी मूल्य बढाउने गरेका छन् । सङ्घका अनुसार गत वर्ष जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु ७०० देखि ८०० र मासु रु. २ हजार सम्ममा बिक्री भएकामा यस वर्ष प्रतिकिलो जिउँदो च्याङ्ग्रानै रु. १२ देखि १५ सयसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अघिल्लो लेख हनुमानढोकास्थित दशैं घरमा विधिपूर्वक घटस्थापना (फोटो फिचर)
पछिल्लो लेख हालको शिक्षा जिवनोपयोगी भएन, शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष सुनिता बराल।